Waa kuma hoggaamiyaha cusub ee Al-Shabab kadib geeridii Axmed Godane? | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Waa kuma hoggaamiyaha cusub ee Al-Shabab kadib geeridii Axmed Godane?
Ayada oo iminka la xaqiijiyey in hoggaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane uu geeriyooday, ayaaa waxaa xarakada Al-Shabaab dhexdeeda ka socda wada-tashi iyo loolan ku aaddan qofkii isaga ka beddeli lahaa gummaadka shacabka Soomaaliyeed.
Loolanka ugu adag waxa uu ka dhex taagna laba nin oo lagu kala magacaabo Mahad Karataay iyo Axmed Diiriye.
Axmed Diiriye oo sidoo kale loo yaqaan Sheekh Mahad, wuxuu ku dhashay tuulada Jawle oo ku dhaw Xarar dheere gobolka Mudug. 1980-kii ayuu Magaalada Muqdisho yimid, isagoo la noolaa Jantalmaan oo ka mid ahaa wasiiradii Siyaad Bare.
Ahmed Diiriye wuxuu ku magacaawnaa Waaliga Bay iyo Bakool, wuxuu sidoo kale ahaa La taliyaha gaarkaa ee Axmed Godane. Ahmed Diiriye qabiil ahaan wuxuu ka soo jeedaa Beesha Dir gaar ahaan Fiqi Muxumud .
Si kastaba, xubno ka tirsan Al Shabaab waxa ay xaqiijinayaa in Mahad Karataay uu ku dhaw yahay 80% in loo magacaabo hoggaamiyaha Al-Shabaab. Sidaa darteedna waxaan xog badan ka bixineynaa taariikhda Mahad Karataay oo ay u badan tahay inuu Godane beddelo.
Mahad Warsame Qaley (Mahad Karatay) wuxuu ku dhashay deegaanka Gadoon oo qiyaastii 25km u jirta Magaalada Dhuusamareed ee gobolka Galgaduud.wuxuu u dhashay qabiilka Hawiye, gaar ahaan Habargidir, Ceyr.
Mahad waxaa da’diisa lagu qiyaasay 49 jir,wuxuu ku barbaaray Magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo uu ka dhigtay dugsi Quraanka.Kaddib wuxuu soo aaday Muqdisho,wuxuuna sii watay waxbarashadiisa. Wuxuu Kitaabo ka raacday Masaajido Muqdisho ku yaal oo laga xusi karo Masjidka Sheekh Cali Suufi.
Sanado kaddib wuxuu Mahad Karatay aaday Magaalada Burco halkaasi oo uu ku sugnaa Abtigii waxana uu ku soo dhameeyay dugsiga hoose iyo dhexe.
Mahad wuxuu ku soo laabtay Muqdisho taariikh aan la xaqiijin,wuxuuna ka qalin jibiyay Dugsiga sare ee 15May. Waxa uu si fiican u bartay Luuqada Carabiga isagoo sidoo kale bartay Karateyga oo naaneys u noqotay madaama uu ku fiicnaa.
Barre jimicsiga ah ayuu ka noqday xarumo ku yaalla Muqdisho waxana uu halkaasi ku bartay dad badan kuwaasi oo casharada uu bixinayay ka maqsuuday.
Dadka yaqaan Mahad Karatay waxay sheegaan in uu si weyn ugu xirnaa hay’addaha wadamada Carabta madaama uu ku wanaagsanaa luuqada carabiga oo uu si fiican u bartay.
Mahad Karatay waa Aabe dhalay hal gabar. Waxaa la dhashay 4 will iyo 2 gabdhood. Wuxuu ku biiray Ururkii Al Tixaad. Burburkii dowladdii dhexe ee Somalia, Mahad Karatay wuxuu ku jiray Al Taxaadkii weeraray Boosaaso ee gobolka Bari.Kaddib wuxuu ka shaqo bilaabay Xawaalada Amal xafiiskeeda Magaalada Nairobi halkaasi oo ay ka qabteen Ciidamada Amaanka Kenya.
Muddo kaddib waxay Kenya ku wareejisay Uganda, laakiin Ciidamada Sirdoonka Ethiopia oo ninkan si weyn u doon doonayay ayaa kala wareegay Uganda kuwaasi oo ku xiray xabsi ku yaalla Magaalada Addis Ababa.
Ethiopia waxa ay ku eedeyneysay Mahad Karatay waqtigaas in uu ka mid ahaa kooxo rasaaseysay Wasiirkii Arrimaha Dibadda Ethiopia Cabdimajiid oo marayay Addis Ababa.
Madaama uu heystay sharciga dalka Kenya, hay’addo caalami ah iyo qabaa’il Soomaaliyeed ayaa baaq diray waxaana dowladda Ethiopia laga codsaday inay sii deyso Mahad Karatay.
Iyadoo taas ka duuleyso Ethiopia waxay u wareejisay xabsiga Mandheera Maamulka Somaliland. Isbadalkii Somaliland ee hogaan cusub uu ugu noqday Daahir Riyaale Kaahin waxaa u suuro gashay in uu ka baxsado xabsigii uu ku xirnaa isagoo adeegsanaya dhaqaale.
Mahad Karatay oo ka soo baxay Xabsiga Mandheera Wuxuu Muqdisho ku booqday hooyadiis Xaawo Xaashi oo waqtigaas ku nooleed Dhismaha Afisooni ee dagmada Xamar – Jajab.
Markii Maxkamadahii Islaamiga la wareegeen Muqdisho iyo badi gobolada koofurta iyo Bartamaha Somalia, waxaa madax looga dhigay Isbitaal laga sameeyay Qabuuraha Talyaaniga oo uu kamid ah ragii qoday.
Burburkii Maxkamadahii Islaamiga ahaa iyo soo xoogeysigii Al-Shabaab oo uu Asaasayaasha ururkaasi kamid ahaa waxa uu ka noqday Madaxa Saadka iyo Tababarada. Waxaa uu tababaro ku sameeyay Qabuuraha Talyaaniga, Isbartiibo, Kuliyada Jaale Siyaad, Xiro Maslax, Dayniile, Laanta Buuro, Labar 50 iyo meele kale.
Isku dhicii Axmed Godane iyo Saraakiil sar sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab Mahad Karatay waxaa loo xilsaay fulinta howlgalada lagu qaarajinayay raga ka soo horjeestay Amiirka Al-Shabaab, howlgaladaasi kadibna waxaa loo magacaabay Madaxa Ciidamada Amniyaad Al-Shabaab oo ah qeybta ugu muhiimsan oo si toos ah uga Amar qaata Amiirka.
Mahad wuxuu aad ugu dhawaa Axmed Godane Amiirkii Al-Shabaab oo ay Maraykanku ku dileen deegaan ka tirsan gobolka Shabeladda hoose.
Waxa uu ku sifoobay deganaan, afgaabni iyo ad adkaan, waana nin galaan gal badan oo ku fir fircoon Abaabulka ciidan, hogaamin adagna leh.
Ma jecla in uu ka soo muuqdo warbaahinta la iska arko waxana uu yahay nin ka dhuunta dadka yaqaan iyo kuwa kale.
Dhaqan ahaa waxa lala simaa Mulah Cumar hogaamiyihii kooxda Daalibaan ee dalka Afghanistan ka dagaalanta.
Dadka yaqaan waxa ay sheegaan in uu ahaa fikirkii ka danbeeyay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaarajiyay Wasiirkii Arrimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka ee Xukuumadii Farmaajo, Cabdishakuur Sheekh Xasan.
Axmed Godane waxaa laga soo xigtay in xilka uu ka dhaxlayo Ibraahim Afghani, hase yeeshee markii ay isku dhaceen kadib wuxuu sheegay in Amiirnimada Al-Shabaab uu ka dhaxli doono Mahad Karatay oo marna aan ku soo warcelin Godane.